UPDATE: Maxaa ka jira in DF Somaliya ay fasaxday duulimaadyadii Kismaayo? +XOG | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Maxaa ka jira in DF Somaliya ay fasaxday duulimaadyadii Kismaayo? +XOG
Diyaarad ka dageysa garoonka diyaaradaha ee Kismaayo /Sawir Hore/Keydka Halqaran.com
Muqdisho (Halqaran.coom) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay dib u fasaxday duulimaadyadii Magaalada Kismaayo, ka dib muddo ku dhow toddobaad oo xayiraad ay saarnaayeen duulimaadyadii taggi jiray magaaladaasi.
Ku simaha Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ahna Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Aadan Isaaq Cali, ayaa ku dhawaaqay in la fasaxay duulimaadyadii rayidka ee Magaalada Kismaayo.
Wasiir Kuxigeenka ayaa sheegay in iminka ka dib ay duulimaadyada Magaalada Kismaayo lamid noqon doonaan duulimaadyada kale ee ka hawlgala magaalooyinka kale ee dalka. Wuxuu sheegay in tallaabadan ay u qaadeen markii uu codsi kaga yimid shacabka Kismaayo.
Wasiir Ku xigeenka oo xalay la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa reer Kismaayo u sheegay laga bilaabo Axadda Saaka in ay si caadi ah u heli doonaan adeegyadii ay bixinayeen diyaaradaha ka shaqeeya magaaladooda.
Waxay tani ku soo aadaysaa, xilli Xildhibaano Baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ay maalmahihii la soo dhaafay ku xanibnaayeen Magaalada Kismaayo.
Ugu dambeyn, hay’adda Duulista Hawada Somaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in si ku meel gaar ahi loo joojiyay duulimaadyadii taggi jiray Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose, muddo saddex maalmood ah.
DF Somaliya oo fasaxday duulimaadyadii Kismaayo